WAR CUSUB: AC Milan oo Atalanta & wakiilka Franck Kessie haatan wada hadal kula jirta – Gool FM
WAR CUSUB: AC Milan oo Atalanta & wakiilka Franck Kessie haatan wada hadal kula jirta
(Bergamo) 03 Maajo 2017 – AC Milan ayaa kulan kula jirta wakiilka Franck Kessie, iyo sidoo kale maareeyayaasha Atalanta iyadoo doonaysa inay Roma ka dul qaaddo laacibkan oo ku kacaya €28m oo euro.
Waxaa si wanaagsan loola socdey in Roma ay heshiis kula jirtey laacibkan caalamiga ah ee reer Ivory Coast ee khadka dhexe oo ay xitaa isla meel dhigeen lacag dhan €28m bishii Jannaayo, balse kooxda reer Bergamo ayaa dib u dhigtay ka gadaal markii ay Inter Milan ka iibiyeen Roberto Gagliardini.
Iminka jeer ay Giallorossi is lahayd dhamaystira heshiiska ayaa waxaa soo gashay AC Milan oo laacibka u gaartey mushahar ka badan midka Roma oo gaaraya €2.2m sanadkiiba + bareemiyo, waxaana la sheegayaa inay haatan kulansan yihiin guddoonka Milan ee Marco Fassone iyo wakiilka Kessie ee George Atangana.
Waxaa xitaa kulanka fadhiya maareeyaha ciyaaraha Atalanta ee Luigi Sartori iyo xitaa madaxwaynaha kooxdasi ee Antonio Percassi, taasoo ka dhigan in Atalanta ay aad ugu dhowdahay inay aqbasho dalabka Rossoneri oo uu la dhacsan yahay Kessie oo San Siro ka doorbidaya Stadio Olimpico.
TOOS u daawo: AS Monaco vs Juventus - LIVE (Shaxda sugan)
SAWIRRO: Kylian Mbappé & walaalkii Ethan oo 7-jir ah oo caawa garoonka isla soo galay!